Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Icandelo lokungenisa izihambi » Ihotele ePennsylvania eManhattan ingena kwi-COVID-19
Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
I-Goodbye Hotel ePennsylvania
Ihotele eyimbonakalo yedolophu embindini wedolophu iManhattan ivala iingcango zayo ngokulungileyo. Ihotele yasePennsylvania ayizukuvulwa kwakhona, ngenxa yesibetho se-COVID-19 sonyaka ophelileyo kunye neminyaka yokuphepha kancinci ukusika ibhloko. Ihotele yesine ngobukhulu kwisiXeko saseNew York yayimi kakuhle, ngaphesheya kweMadison Square Garden kunye nePenn Station, isenza indawo yokumisa yendalo kunye nexabiso eliphantsi kubahambi kunye nabahambi bekonsathi ngokufanayo.
Ihotele yakhiwa yiPennsylvania Railroad kwaye kamva yafunyanwa yiStatler Hotels, yaba yi-Hotel Statler.
Ihotele yathiywa igama emva kokuba yayithengiselwe uConrad Hilton ngo-1954 xa yaba yiStatler Hilton emva koko yatshintshela kwiNew York Statler emva kokuba ithengisiwe ngo-1979.
Olunye utshintsho olutshintshileyo lobunini litshintshe igama laba yiNew York Penta, kodwa ekugqibeleni laya kugqitywa kwi-Pennsylvania ePennsylvania.
Ihotele yasePennsylvania yakhiwa yiPennsylvania Railroad kwaye yaqhutywa nguEllsworth Statler. Yavulwa ngoJanuwari 25, 1919 kwaye yayilwa nguWilliam Symmes Richardson wenkampani iMcKim, Mead & White, eyilenza nesitishi sasePennsylvania sokuqala esimi ngaphesheya kwesitalato.
Iihotele zeStatler, ezazilawula iPennsylvania ukususela ekwakhiweni kwayo, zafumana ipropathi ngqo kwiPennsylvania Railroad ngoJuni 30, 1948, zaze zabizwa ngokuba yiHotel Statler ngoJanuwari 1, 1949. Zonke iihotele ezili-17 zakwaStler zathengiselwa uConrad Hilton ngo-1954 kunye Ihotele yaba yi-Statler Hilton ngo-1958. Isebenza phantsi kwelo gama kude kube ngo-1979, xa uHilton wayithengisa ihotele kumphuhlisi uWilliam Zeckendorf, Jr., nge-24 yezigidi zeedola. Ihotele yabizwa ngokuba yi Inew york Statler kwaye yayiqhutywa yiDunfey Family Hotels, icandelo leAer Lingus. Ihotele yathengiswa kwakhona nge-46 yezigidi zeedola ngo-Agasti 1983. Inzala ye-50% yathengwa ngu-Abelco, iqela lotyalo-mali elinabaphuhlisi u-Elie Hirschfeld, u-Abraham Hirschfeld, kunye no-Arthur G. Cohen, kunye namanye ama-50% athengwa yi-Penta Hotels chain. , indibaniselwano yeBritish Airways, iLufthansa, neSwissair. Abanini abatsha bathiya ihotele i-New York Penta kwaye baqala ukuyilungisa. Ngo-1991, amaqabane e-Penta athenge isibonda se-chain kwihotele kwaye ayibuyisela kwigama layo lokuqala, i-Hotel Pennsylvania.
Kukho imbali efanelekileyo kule hotele inkulu, ingakumbi i-Glenn Miller Orchestra's “Pennsylvania 6-5000.” Kude kube ekuqaleni kuka-Meyi ka-2021, usenokubiza u-212-PE6-5000, kwaye uve ukuyeka kwakhona "iPennsylvania 6-5000" ngaphambi kokuqhagamshela kumsebenzisi. Kukusetyenziswa okude kakhulu kwenombolo yefowuni eNew York. Ukususela ngalo mzuzu ubize ihotele, umculo kunye nembali bekumema ukuba ukhumbule isithethe esihle sehotele yasePennsylvania.
ICafé Rouge yayiyeyona ndawo iphambili yokutyela kwihotele iPennsylvania. Isebenze njengeklabhu yasebusuku iminyaka emininzi, kodwa ngoku isebenza njengendawo eyahlukileyo ehotele ngokupheleleyo, njengendawo eneenjongo ezininzi. Esi sithuba sodwa ehotele esiphume kwiinguqu ezinkulu ngexesha lolwakhiwo olukhulu lwango-1980.
Ngasekupheleni kweminyaka yee-1930 kunye nee-1940s zakuqala, i-Café Rouge yayinonxibelelwano olukhulu lwebhendi kwi-NBC Red Network (emva kowe-1942, iNBC Radio Network) kwaye yaziwa ngokuba yimidlalo ebibanjelwe ngaphakathi. Amagcisa amaninzi adlalwe kwiCafé- njenge-The Dorsey Brothers, uWood Herman, u-Count Basie, uDuke Ellington, kunye no-Andrews Sisters.
Ngenye ingokuhlwa ngo-Novemba ngo-1939, ngelixa kwakubandakanyeke ixesha elide kwiCafé Rouge, umphathi weqela u-Artie Shaw washiya ibhendi phakathi kweeseti kwaye wagqiba kwelokuba wayenelisekile kwishishini lebhendi nakulo lonke uhanahaniso lokuba, unyaka onesiqingatha, inkokeli yeqela elikhulu elithandwayo kwilizwe. U-Shaw ngokusisiseko uyeke eyakhe ibhendi kwangoko, isenzo esinyanzela I-New York Times ukuba ivakalise izimvo kuhlelo.
Ngexesha lika-1940-42, i-Glenn Miller Orchestra nayo yayiphindaphinde ukubhukisha ixesha elide kwigumbi ngexesha leminyaka emithathu iprofayile ephezulu kaMiller njengenkokeli. I-okhestra kaMiller yasasazwa kwiCafé; ezinye zarekhodwa nguRCA Victor. I-orchestrator yenqununu kaShaw ukusuka ngo-1937-39, uJerry Grey, waqeshwa kwangoko nguMiller njengomcwangcisi wabasebenzi xa uShaw eshiya iqela lakhe; Kwakungexesha lokubandakanyeka kukaMiller ngo-1940 ehotele apho uGrey wabhala ingoma ethi “Pennsylvania 6-500” (kunye namazwi kamva awongezwa nguCarl Sigman) eyasebenzisa inombolo yomnxeba yeHotele, 212-736-5000, eyayiyifowuni yaseNew York Elona nani lisetyenziswa ixesha elide, iqela likaLes Brown, kunye noDoris Day owayezicule, bazisa ingoma yabo ethi “Uhambo olushukumisayo” eCafé ngoNovemba 1944.
IKhomishini yoLondolozo lweeNdawo eziHlaziyiweyo zeSixeko saseNew York iphonononge i-Café Rouge yenqanaba lokumakishwa ngokusekwe kumaphepha ovavanyo awenziwe yi-Hotel Pennsylvania Preservation Society (eyayisakuba yiSave Hotel Pennsylvania Foundation). Nge-22 ka-Okthobha ka-2010, i-Café yamkelwa njengomgqatswa wokuphawulwa, ikakhulu ngenxa yokuba iprojekthi ye-15 Penn Plaza yamkelwa kwaye yamodareyitha, kodwa hayi utshintsho olutshabalalisayo lwangaphakathi ukusukela oko yayisakhiwa. Iprojekthi ye-15 Penn Plaza yayiya kubandakanya ukudilizwa kweCafé.
Uninzi lwezinto zokuhombisa zangaphakathi zihlala zihleli. Isiseko kunye nophahla olunomthi kunye nezinye iinkcukacha zokwakha zihlala, nangona igumbi lonke, kunye nophahla, zipeyintwe ngaphezulu ngombala omhlophe. Iziganeko ezininzi ezivela kwiVeki yeFashoni yaseNew York ka-2013 zabanjwa eCafé Rouge.
Kwi-2014, iCafé Rouge yaguqulwa yenziwa kwinkundla yebhasikithi yangaphakathi eyaziwa ngokuba yiTheminali 23, ukukhumbula ukumiliselwa kweMelo M10 licandelo laseJordani Brand laseNike. Inika indawo yolutsha kunye nabadlali bezikolo eziphakamileyo.
UDoris Dabish uthi:
Agasti 28, 2021 kwi-22: 02
Kubuhlungu kakhulu ukuyibona isondele, waya kwiisemina ezininzi zonyango kule minyaka ingama-35 idlulileyo. Ibiyindawo yokuhlangana kuthi kangangeminyaka engama-50.